ZDF te EU te Nippon te tawh ih Zogam khantoh nadingaMeeting khawm :: ZOMI DAILY
posted on 23 January 2015 at 8:49 am Lomkholna: News, Zomi
ZDF – CEC
S/no – ZDF/50/2015
A brief grateful statement on account of meetings with the International Sectors of Humanitarian Concerns Agencies such as the Nippon Foundation, the (EU) ECHO of Myanmar, and the Food and Security Operational Projects during the 8th to 19th January 2015 in Yangon.
The inhabited area of northern Chin State, Myanmar called Zomi area has been isolated and ignored for many years and the realistic environment was never unearth to the outsiders. However, from the 8th to 19th January 2015 the local based organization called Zomi Development Foundation (ZDF) leader Pu Paul Pau and two other Central Committee members had meetings with Dr. Desmond Molloy the Programme Director of the Nippon Foundation and his colleague Programme Director and Project Manager. Then the Head of (EU) ECHO Myanmar- Sir, Nicolas LOUIS, Directorate- General for Humanitarian Aid and Civil Protection and his colleague the Programme Manager, Peace Support, Deputy Head of Cooperation and Political Officer. ZDF also met with Mr. Samir Maleh- Country Director, ACF and Mr. Guillaume Foliot- Deputy Country Director- World Food Pragramme.
စာအမှတ် – ZDF/ 51/2015
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော ဇိုမီးတိုင်းရင်းသားများကိုပြည်တွင်းပြည်ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီအဖွဲ့၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ အသီးသီးများမှဇိုမီးကျေးလက်ဒေသစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော လူ့ဘောင်ဘ၀ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးနှင့်သဘာဝဘေးဒဏ်ခံသောကိစ္စရပ်များနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်စပ်မှုတခါမှ မခံစားဘူးကြသော ကျွန်တော်တို့ ဇိုမီး တိုင်းရင်းသားများ ယခု ခရစ်သက္ကရာဇ် – ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၈-၁၉) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဇိုမီး တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်စား၊ ဒေသခံလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဇိုမီးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း ZDF ခေါင်းဆောင် ပူပေါလ်ပေါင် ဦးဆောင် အဖွဲ့ (၃) ဦှးနှင့် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းMrဒက်စ်မွန်မော်လှိုင်(စီမံကိန်းညွှန်ကြားရေးမှူး) ဦးဆောင်အဖွဲ့(၃)ဦးသော်လည်းကောင်း(အီးယူ)လူသသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး Mr နီကိုလာလူပီ(အီးယူ)Head of ECHO Myanmar ဦးဆောင်အဖွဲ့ (၅)ဦးသော်လည်းကောင်း၊ Mr Samir Maleh Country Director –ACF သော်လည်းကောင်း၊ Mr, Guillaume Foliot Deputy Country Director – World Food Programmed အဖွဲ့ အသီးသီးများနှင့် ဇိုမီတိုင်းရင်းသားများ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံသောကိစ္စရပ်သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မှလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားသောလူ့ဘောင်ဘ၀တိုးတက်မှု မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် အနှိမ့် ကျဆုံး ဒေသ လူမျိုးများဖြစ်သော ကိစ္စရပ်များနက်ရှိုင်းစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခြင်းသည် ပထမဦးဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် မှတ်တမ်းတင်ပြုအပ်ပါသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှာအနာဂတ် ဇိုမီတိုင်းရင်းသားများ ထွက်ပေါ်လာမည့်နောက်ဆက်သွယ်များတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးနှင့်ကယ်ဆယ် ရေးအဖွဲ့ အသီးသီးများမှလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြင့်မားသောလူ့ဘောင်ဘ၀တိုးတက်လာစေရေးနှင့် သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စရပ်များ ဒေသခံကိုယ်စား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သော ဇိုမီးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း ZDF အဖွဲ့များနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့်ဝိုင်းဝန်းအကူအညီများ ကယ်ဆယ်ရေးများလက်တွဲပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြမည်ဟု ကြီးကြီးမားမားယုံကြည်မျှော်လင့်ကြကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထုတ်ပြန် ကြေငြာအပ်ပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ (၂၁)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဗဟိုရုံးချုပ်အမှတ်(ဘ/၅၉) လွယ်ဘွားလ်းရပ်ကွက်၊ တီးတိန်မြို့၊
ဖုန်း – (+959) 947072124, (+959) 932387154
Previous: Sociology Zomi, Eimite’ nuntakpihzia ka muhdan (Intuition or Incentive)
Next: Saudi Arabia te kumpipa King Abdullah sita